शासक पार्टीका कुन कुन नेताहरू ‘रअ’ को प्रभावमा ? - Online Majdoor
वैशाख २४ गतेको नेपालको एक अनलाइन समाचार माध्यममा खबर प्रकाशित भयो– “उच्च सुरक्षा स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार दिल्लीमा रहेर नेपाल र भुटान हेर्ने ‘रअ’ का सेकेन्डम्यान धीरज मुखिया पनि केही दिनदेखि काठमाडौँमा छन् । उनको साथमा टोमर नामका अर्का अधिकारी पनि काठमाडौँ आएको बुझिएको छ । मुखिया सिक्किम, दार्जिलिङतिरका भएकाले नेपाली भाषामा सहज कुरा गर्न सक्छन् ।”
उक्त समाचार माध्यममा लेखिएको छ– “गौशालामा रहेको एक धर्मशालामा भारतीयहरूको बाक्लो उठबस रहेको र त्यहाँबाट विभिन्न राजनीतिक नेतालाई भेटघाट गर्ने गरिएको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दियो । सो स्रोतका अनुसार भारतको गुप्तचर संस्थाले केपी ओलीको चाहनाअनुरूप देशलाई मध्यावधि चुनावतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।”
गएको चैत ७ गते प्रकाशित एउटा अर्को अनलाइनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ प्रकाशित भयो । माओवादीका अध्यक्ष दाहालले ५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जाति भेद उन्मूलन दिवसमा भनेका थिए– “केपी ओली २५ वर्षदेखि विदेशीबाट पालिएका पात्र हुन् । विदेशीले यो संविधानलाई निस्तेज पार्न मान्छे खोज्दै जाँदा केपी ओली भेट्टायो । केपी ओलीले ठग्नेमात्रै काम गरेपछि मैले १९ पृष्ठ लामो दस्तावेज ल्याएको हुँ ।”
केपी ओलीले यसरी जवाफ दिएका थिए, “दाहालको नाभी विदेशी (भारत ?) सँग जोडिएको छ । दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वको बेला दाहाल जेलवाला तेलले जुल्फी कोरेर दिल्ली बसेका थिए । दाहालसँग अब त्यो बैँस, सेना र हतियार छैन । रेस्लिङको कोर्टमा मुक्कासँगै ढल्नेछन् ।”
वैशाख २७ गतेको बैठकमा प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची छ । नेकाले वैशाख २६ गते देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । यो पार्टीले अगाडि पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो । वैशाख २६ गते बिहान जसपाका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले देउवालाई भेटेको र त्यसपछि प्रम केपी ओलीलाई भेटेर तटस्थ बस्ने जानकारी गराएको खबर छापियो । यसअघि जसपाका ठाकुर र महतो पक्षले प्रम ओलीलाई समर्थन गर्ने तयारी गरेका थिए । प्रम ओलीले ठाकुर र महतोको आग्रहमा जसपाका २१८ जना कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा पनि फिर्ता गरे । प्रतिनिधिसभाको चुनावमा धनुषाबाट महतोलाई जिताउन एमालेको अप्रत्यक्ष हात भएको हुँदा महतो केपी ओलीको समर्थनमा देखिएको बताइन्छ । पछि महतो र ठाकुरबीच पनि नेतृत्वको विवाद भएपछि यो समूह ओलीको समर्थन नगर्नेमा पुगेको देखिन्छ ।
एमालेभित्र ओली र माधव समूहबीच पनि मतभेद छ । ओलीले माधव समूहलाई समानान्तर पार्टी गतिविधि गरेकोमा माफी मागेर पार्टीमा फिर्ता आउनुपर्ने अडान राख्दै छन् । गत फागुन २८ गते ओलीले आफ्नो समूहलाई कारबाही गरेको निर्णय फिर्ता गरी २०७५ जेठ २ गतेको पूर्वअवस्थामा पार्टीलाई पु¥याउनुपर्ने माधव पक्षको अडान थियो । यो मतभेद नटुङ्गिदा माधव समूहका २० जनाले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिने चेतावनीपूर्र्ण समाचार पनि सार्वजनिक भयो । एमालेका ओली र माधव समूहलाई मिलाउन राष्ट्रपति भण्डारीले समेत माधवलाई बोलाएर सम्झाइ–बुझाइ गरेको समाचार पनि प्रकाशित भयो ।
सभामुख अग्नी सापकोटाले एमाले, नेका, माओवादी, जसपासँग छलफल गरी वैशाख २७ गतेको बैठकमा प्रम ओलीले पेश गर्ने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनाएको बताइन्छ । यी सबै गतिविधिमा उल्लेखित अनलाइन समाचारमा छापिएजस्तै ‘रअ’ को प्रभावमा को–को पर्ने हुन् ? ओली, देउवा, दाहाल, माधव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव कुन चाहिँ पार्टीका नेता ‘रअ’ को प्रभावमा परे ? कसले कसलाई पछार्ने हुन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफ एकदिन सार्वजनिक हुने नै छ ।
पचास दिनअघि भारतको महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेशलगायत केही स्थानमा कोभिड–१९ भाइरस फेरि तीव्ररूपले फैलिन थालेपछि त्यहाँ मानिसको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन थालिएको थियो । त्यसबेला भारतमा दैनिक सङ्क्रमित ४० हजार ३५० र मृत्यु सङ्ख्या १८९ थियो भने नेपालमा त्यसबेला दैनिक १२५ जना कोभिड–१९ सङ्क्रमित र मृत्यु सङ्ख्या १ मात्र थियो । सङ्क्रमितमध्ये काठमाडौँमा ४४, ललितपुरमा ८ र भक्तपुरमा ८ जनामात्र थिए । भारतका दुवै सहरमा रात्रिकालीन कफ्र्यु र नागपुरजस्तो सहरमा लकडाउन हुँदा कामको सिलसिलामा भारत रहेका नेपालीहरू फर्कँदै थिए । भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको स्थिति र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने नोक्सानबारे सीसीएमसीमा त्यसबेला नै छलफल भएको थियो । सर्वसाधारण नेपाली समेतले खुला सीमा नाकामा व्यवस्थित क्वारेन्टिन निर्माण गर्नुपर्ने र विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर समयमै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने औँल्याएका थिए ।
पचास दिनयता वैशाख २६ गते भारतमा कोभिड–१९ सङ्क्रमित दैनिक ४ लाख ९ हजार ३०० र मृत्यु सङ्ख्या ४ हजार १३३ भन्दा बढी पुग्यो । भारतबाट नेपाल फिर्ता हुनेहरू वैशाख भरिमा १ लाख ७० हजार पुगेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा आज सङ्क्रमित ९ हजार २७१ र मृत्यु १३९ जना पुग्यो ।
कोभिड–१९ सङ्क्रमणबारे आमसञ्चारमा प्रकाशित समाचारका शीर्षकहरू यस्ता थिए– ‘शøया खचाखच–पेटीमा छटपटी’, ‘भक्तपुर अस्पतालको शøया बिरामीले भरिए’, ‘२८ सांसदलाई कोभिड–१९ पुष्टि’, ‘सेनालाई शव व्यवस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ’, ‘बिजुली नहुँदा पीसीआर मेसिन चलेन’, ‘सरकार गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या’, ‘जोखिममा बिरामी–सरकार रमिते’, ‘आइसोलेसन बने तर अक्सिजन छैन’, ‘अस्पतालमा बेड छैन–पालो कुर्दै जान्छ ज्यान’, ‘आइसोलेसन सञ्चालनमा समस्या’, ‘अस्पताल चहार्दा चहार्दै निधन’, ‘भेन्टिलेटर नपाउँदा मृत्यु’, ‘भेन्टिलेटर चलाउने जनशक्ति नहुँदा सङ्क्रमितको मृत्यु’, ‘कोभिडले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त’, ‘हेलिकप्टरका भाडाले थलिन्छन् बिरामीका आफन्त’, ‘मानवीयताले अन्तिम सास नफेरोस्’, ‘ज्याला मजदुरी गर्नेहरू महामारीको मारमा’ आदि । यी समाचार शीर्षकहरूले गतवर्ष कोभिड–१९ सङ्क्रमणयता सरकार र तिनका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष र तिनका नेताहरू देश एवम् जनताप्रति जिम्मेवार नदेखिएको पुष्टि गर्छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नुको कारण अहिलेसम्म सरकारमा गएका शासक पार्टीका नेताहरू जिम्मेवार भएर बन्दोवस्तमा नलागेकाले नै हो । यही स्थिति कायम रहे आगामी केही हप्ताबाट भारतमा दैनिक कोभिड सङ्क्रमित र मृत्युको सङ्ख्या दुगुनाको दरले बढ्ने विज्ञहरूको मत छ । नेपालको स्थिति पनि भारतको हाराहारीमै पुग्ने खतरा देखिन्छ ।
अन्धराष्ट्रवाद र सङ्कीर्णवाद के हो ?
कसैलाई भ्रम नहोस् !
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकीमा नेमकिपाको शुभकामना सन्देश
पेरुको राष्ट्रपतिमा पूर्वशिक्षक पेड्रो कास्टिल्लो
बागमती प्रदेश सरकारको नीति – कार्यक्रमबारे
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट मात्रै महामारी नियन्त्रण सम्भव